अच्युत कोइराला - Achyut | Nagarik News - Nepal Republic Media
२१ असार २०७९ मंगलबार
अच्युत कोइरालाका लेखहरु :
कोभिड १९ ले सिकाएको एउटा पाठः घरभित्रको वायु कत्तिको शुद्ध छ?
शुद्ध वायु नभएको ठाउँमा अर्को मानिसले फेरेको श्वास, हामीले नै निल्ने सम्भावना ४% हुन्छ। यही कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने गरेको पाइएको थियो।
अच्युत कोइराला ७ जेष्ठ २०७९ शनिबार ७ मिनेट पाठ
दलित अधिकारका लागि जो अपमानित हुन तयार भए
एकदिन उनी मावली गाउँमा पुराण भन्न निस्किएका थिए। भोजन गर्ने बेलामा एक जना स्थानीय परियार थरका व्यक्ति आइपुगे। शुद्ध पण्डितका अघिल्तिर ‘दमाईं’ आएको देखेपछि उनले घरका मानिस बोलाए र भने, ‘यी दाइलाई सुरुमा खान दिनू; त्यसपछि मात्र म भोजन लिने छु।’
अच्युत कोइराला १७ वैशाख २०७९ शनिबार १० मिनेट पाठ
गएको वर्ष बेलायती सेनाका एडमिरल टोनी रेडकिनले समुद्रमुनि रुसले त्यस्ता केबललाई ड्रोनमार्फत पत्ता लगाउने, तिनलाई छेडछाड गर्ने, सूचना चोर्न उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकसित गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
अच्युत कोइराला १९ चैत्र २०७८ शनिबार ८ मिनेट पाठ
पुटिनको राजनीतिक यात्रा
पुटिनका पिता कारखानामा काम गर्थे। साथसाथै उनी कानुन उल्लंघनकर्ताको नियमन गर्ने एनकेभिडी नामक संस्थामा समेत संलग्न थिए। त्यो बेला सबै जसो मानिसहरू कम्युनमा बस्थे र सोही कम्युनमा रहेका बेला पुटिन जन्मिएका थिए। रमाइलोका लागि पुटिन र उनका साथीहरू मुसा लखेट्ने काम गर्थे।
अच्युत कोइराला १२ चैत्र २०७८ शनिबार ७ मिनेट पाठ
युक्रेनको सपना तोड्ने नाटो के हो?
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका खण्डमा नाटोले उसको रक्षा गर्ने अपेक्षा अभिनेताबाट युक्रेनको राजनीतिक तारणहार बनेका भोलोदिमिर जेलेन्सीसँगै अन्य धेरैलाई थियो। धेरैको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको नाटोको पृष्ठभूमि उसो भए के हो ?
अच्युत कोइराला २८ फाल्गुन २०७८ शनिबार ७ मिनेट पाठ
कोभिडको महामारी सकिन लागेको हो?
यसअघिका महामारी नियन्त्रण गर्न दशकौँ लागेको थियो। यो महामारीले भने छोटो अवधिमा भाइरस अनुसन्धान मात्र होइन, औषधि उत्पादन, वितरण र खोपलाई समेत प्रभावशाली तरिकाले सम्पन्न गरेर संसारलाई एउटा उज्यालो पाटो वैज्ञानिक र व्यावसायिक समुदायले देखाएका छन्।
अच्युत कोइराला २१ फाल्गुन २०७८ शनिबार ९ मिनेट पाठ
रुस–युक्रेन भाइभाइ भन्दाभन्दै कसरी जुध्न पुगे?
यो खिचातानीमा सबैभन्दा बढी घाटा त सर्वसाधारणलाई छ। देशका लागि मर्ने मार्ने जमात त तुरुन्त तयार होला तर यो युक्रेनी संकटले लामो समयसम्म रुसले भनेजस्तो भाइभाइको सम्बन्ध नराम्रोसँग तिक्ततापूर्ण हुने र कहिल्यै पनि आत्मीय हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ।
अच्युत कोइराला १४ फाल्गुन २०७८ शनिबार ७ मिनेट पाठ
असफल प्रेम के हो? कसरी त्यसले विरह जन्माउँछ र अपराधबोध र विस्मात कसरी सिर्जनशील बन्न सक्छ भन्ने एउटा प्राचीन कथाले सिकाउँछ। ग्रिसेली मिथकमा एउटा पान नामक देउता छन्। उनी गर्भाधानका देउता हुन्। उनी सक्रिय यौनका पनि देउता हुन्। उनी पूर्वीय कामदेवका पश्चिमेली अवतार हुन्।
अच्युत कोइराला २९ माघ २०७८ शनिबार ३ मिनेट पाठ
नयाँ वर्षको प्रचलन
आधिकारिक रूपमा नयाँ वर्षका बेला लिइने कसमलाई अमेरिकाको बोस्टनबाट निस्कने ‘बोस्टन’ अखबारले लिखित रूपमा सर्वसाधारणका वाचाकसम प्रकाशन गरेको तथ्य पाइन्छ ।
अच्युत कोइराला १० पुस २०७८ शनिबार ५ मिनेट पाठ
‘मधेसमा राज्यप्रतिको निराशा व्याप्त छ। उनीहरू एक्लो अनुुभव गरिरहेका छन्। त्यो एक्लोपन र निराशा कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ र अगल देश बनाउने अवधारणालाई बल पुु¥याउन सक्छ। यस्ता कुराले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ थाहा छैन तर नेपाल र नेपालीलाई घाटा पु¥याउँछ। त्यसैले, देश जोगाउने संयन्त्रको विकास गर्ने अवधारणास्वरूप ‘एक’ जन्मेको हो।’
अच्युत कोइराला ९ आश्विन २०७८ शनिबार ८ मिनेट पाठ
अच्युत कोइरालाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्